ကနဦးအသင်းတော်၏လှို့ဝှက်ချက်ကို စကားလုံးသုံးခွန်းကပေးထားသည်။ | Three Words Give the Secret of the Early Church! | Real Conversion
နိုဝင်ဘာလ ( ၁၉ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“သူတို့သည်လည်း ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်းအစဉ် တညီတညွတ်တည်း နေ၍၊ ကိုယ်အိမ်၌ မုန့်ကိုဖဲ့လျက် ကြည်ဖြူရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သော စိတ်နှင့်အစာအဟာရကို သုံးဆောင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း ချီး မွမ်း၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းအကြောင်းကို ရကြ ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် သခင် ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏။” (တမန် ၂း ၄၆၊ ၄၇)
ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များသည် ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းသို့ ဦးတည်နေပါ သည်။ သူတို့သည် အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် ၃၀ နှစ်ကြား လူငယ်များ၏ ၈၈% ထက်များသည့် ပမာဏကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါသည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူကြိုက်များသော လူထုသဘောထားကို မေးမြန်းသူ George Barna က ထိုအကြောင်းကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက ပြောပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “မိသားစုအသက်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်” က ၈၈% သောကလေးသူငယ်များသည် ဧဝံဂေလိအသင်းတော်မိသားစုများမှပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြ ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်လောက်တွင် အသင်းတော်ကိုစွန့်ခွါကြကာ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာ ကြတော့ပေ” ဟု ဆိုထားသည်။ (Baptist Press, ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၂) တဖန် ကျွန်တော်တို့အ သင်းတော်သည် လူကထဲမှ လူငယ်များစွာကို ပြန်လည်ရရှိသည်မှာ လူသိများသောအရာဖြစ် ပါသည်။ ဒေါက်တာ James Dobson က “၈၀% သော အသင်းတော်ကြီထွားမှုကို အသင်းဝင် ခြင်းအပြောင်းအလဲမှဖြစ်ပေါ်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ (“မိသားစုသတင်းစာကို ဦးတည်ချက်”၊ ဩဂုတ်လ ၁၉၉၈)
ဧဝံဂေလိစာရေးဆရာ Jen Hatmaker က “ကျွန်တော်တို့သည် (အသင်းတော်သို့) လူသစ်များကို ဆွဲမခေါ်လာနိုင်သည်သာမက၊ ရှိနေသူများကိုပင်လျှင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါ။ ခန့်မှန်းခြေအရ အမေရိကန်အသင်းတော်ထက်ဝက်လောက်သည် ၉၄ % သောအသင်းတော် များ၏ကြီးထွားမှုအကြောင်းစကားစမြည်ပြောကြရာဝယ် လူသစ်မရသည်သာမက သူတို့သည် မကြီးထွားလျှင် သူတို့အစေခံသောအဖွဲ့အစည်းရှိလူများကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏လားရာ သည် အောက်ဘက်သို့ကျဆင်းခြင်းသာဖြစ်ပြီး (ခရစ်ယာန်တို့၏အသက်ရှင်မှုသည် ငုတ်တုတ် ဖြစ်နေသည်။)ဟုဆိုပါသည်။ (Interrupted; When Jesus Wrecks Your Comfortable Christianity, NavPress, ၂၀၁၄၊ စာ-၇၉၊ ၈၀)
ယခုအခါ တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ကိုကြည့်ပါ။ “ဂယ်ရိုလိုင်းနားတောင်ပိုင်းနှစ် ခြင်းအသင်းတော်ရှိ” Carol Pipes ၏တင်ပြချက် စာတန်းက “အသင်းတော်များသည် (လွန်ခဲ့ သောနှစ်များက) အသင်းသားပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ကျော်ထက်မကသော အရေအတွက်ကို ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြသည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက အကြီးမားဆုံးသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ (Annual Church Profile) တင်ပြထားသောဗတ္တိဇံ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က ရှစ်နှစ်လောက်က ကျဆုံးခဲ့ပါသည်။ မနက်ကအခြေအနေသည် ၁၉၄၇ ကတည်းက အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေပင်ဖြစ် ပါသည်။ Thom Ranier (SBC တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်) က “ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၏ဦး တည်ချက်မှာ တိမ်းညွတ်နိမ့်နေမှုဖြစ်သည်အကြောင်းက ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးကို ကျိုးပဲ့စေသည်” ဟုဆိုပါသည်။ ဒေါက်တာ Frank Page (တောင်းပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏အခြားဦးဆောင် သူ) က “စစ်မှန်သောတရားမှာ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် ငွေအနည်းငယ်သာပေးသည့် လူ အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတို့ကို ခရစ်တော်ထံ မပို့ဆောင်နိုင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အရှင်ယေရှုခရစ်၏ဝိညာဉ်ရေးရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ မသင်ကြားပေးနိုင်ပါ” ဟုဆိုပါသည်။ သူက “ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ ပထမရာစုအ သင်းတော်များတွင်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ တပည့်တော်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်မှုကို အလေးအ နက်ထားရန် ဘုရားသခင် မစတော်မူပါ။” (၎င်း၊ စာ-၄)
ဤပုံရိပ်လွှာများက စိတ်ပျက်စရာ၊ အမေရိကန်အသင်းတော်များ၏ စိတ်ပျက်စရာပုံစံ များကို ပေးထားပါသည်။ သူတို့သည် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောအသင်းသားများကို ဆုံးရှုံးကြသည်။ ပျောက်ဆုံးသောကမ္ဘာရှိလူများကို ရရှိဖို့ အလွန်ပင်ခက်ခဲနေသည်။ အသင်းတော်ကြီးများက လည်း ပျောက်ဆုံးသောကမ္ဘာမှ ပြောင်းလဲလာသူအနည်းစုကိုသာ အသင်းတော်ထဲ ခေါ်သွင်း နိုင်ကြသည်။
၎င်းမှာ အမေရိကန်နှင့်အနောက်တိုင်းကမ္ဘာတွင်ရှိသောအသင်းတော်များ၏ ဝမ်းနည်း စဖွယ် ပုံရိပ်လွှာပင်ဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုတွင်ရှိသော ကနဦးအသင်းတော်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းကို တဖန် ဖက်ပြဦး မည်။
“သူတို့သည်လည်း ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်းအစဉ် တညီတညွတ်တည်း နေ၍၊ ကိုယ်အိမ်၌ မုန့်ကိုဖဲ့လျက် ကြည်ဖြူရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သော စိတ်နှင့်အစာအဟာရကို သုံးဆောင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း ချီး မွမ်း၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းအကြောင်းကို ရကြ ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် သခင် ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏။” ((တမန် ၂း ၄၆၊ ၄၇)
နှိုင်းယှဉ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာပါတကား။ သူတို့သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြသည်။ သူတို့သည် နေ့တိုင်း တွေ့ဆုံမိဿဟာရပြုကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အမြဲချီးမွမ်း ကြသည်။ “ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏။” (တမန် ၂း ၄၈)
ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones ကလည်း “သွားရမည့်နေရာမှာ တမန်တော်များ၏ တမန်တော်ဝတ္ထုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် စွမ်းအားရှိသည်၊ လန်းဆန်းတက်ကြွသောနေ ရာရှိသည်။ ကနဦးအသင်းတော်၌ ဘုရားသခင်၏အသက်ကို ခံစားထိတွေ့နိုင်သောနေရာပင် ဖြစ်ပါသည်”ဟုဆိုသည်။ (Authentic Christianity, အတွဲ ၁ တမန် ၁-၃ ၊ The Banner of Truth Trust, စာ-၂၂၅) ၎င်းက ပထမရာစုအသင်းတော်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ စိတ်အားထက် သန်မှုနှင့်တန်ခိုးအကြောင်းကို ဖတ်ရှုရန် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးကို တုန်ခါစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဒေါက်တာ Michael Green ၏ စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းက ခွန်အားဖြစ်စေပါသည်။ Evangelism in the Early Church (Eerdmans, ၂၀၀၃)) ဤစာအုပ်နှင့်တမန်တော်ဝတ္ထုကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ပထမရာစုရှိအသင်းတော်များ၏အသက်တာပုံဆောင်ချက်ကိုပြသသော ဓမ္မသစ်ဂရိစကားလုံး များစွာရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ဂရိစကားလုံး “ကူရိရော့ဆ်”ရှိသည်။
ဤစကားလုံးက အင်္ဂလိပ်စကားတွင် “သခင်” ဟု အဓိပါယ်ရှိသည်။ “သခင်”၊ “အရှင်” ၊ “ပိုင်ရှင်”၊ “အုပ်စိုးသူ” ဟုဆိုလိုသည်။ တမန်တော် ၁၀း ၃၆ တွင် ပေတရုက သခင်ယေရှုအ ကြောင်းကို ပြောဆိုသည့်အချိန်က အသုံးပြုထားသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။
“ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ရန်ငြိမ်းခြင်းတရားကို ဟောတော်မူ၏။(အရာ သိမ်းတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။)” (တမန် ၁၀း ၃၆)
ကနဦးခရစ်ယာန်များက သခင်ယေရှုအကြောင်းကို မည်သို့သက်သေခံဟောပြောသည်ကို ပြောပြသော ဒေါက်တာ Green ၏ ပြောပြချက်ကို နားထောင်ကြပါစို့။
ယေရှုခရစ်သည် မေရှိယဖြစ်သည်ဟူသော၍လည်းကောင်း၊ သို့မ ဟုတ် သူ့အားဖြင့် ကနဦးကတိတော်များပြည့်စုံလာသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့က ကျဲ့ပြန့်စေသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငြိမ်သက် ခြင်းသတင်းကောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြသည်။ ယေရှု၏ခေါင်း ဆောင်မှုကိုတွေ့ရှိရသည်။ ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်း ကို တွေ့ရှိကြသည်။ ယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို တွေ့ ရှိရသည်။ ယေရှုကိုယ်တိုင်၏ရိုးစင်းမှုကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သတင်း ကောင်းကိုဝေငှသက်သေခံသည့် ကနဦးတရားဟောဆရာများက ဟောကြားသည့် တရားဒေသနာတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ၎င်းမှာ ယေရှုအကြောင်းသာဖြစ်သည်။ Origen (၁၈၅-၂၅၄) က“ကောင်း သောအရာတစ်ခုမှာ အသက်ဖြစ်သော်လည်း ယေရှုခရစ်သည် ထို အသက်ပင်ဖြစ်သည်။အခြားကောင်းသည့်အရာမှာ လောကအ လင်းဖြစ်ပြီး ယေရှုသည် အလင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သမ္မာ တရား၊ တံခါး၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာ အားလုံး ကယ်တင်ရှင်သွန်သင်ပေးသောအရာမှာ သူကိုယ်တိုင် ပင်ဖြစ်ပါသည်” ဟုဆိုသည်။ Origen က တမန်တော်တို့၏မူရင်း စာစောင်နှင့်အခြားသူတို့ထံသင်ယူသောသူများထံ၌ သတင်းစ ရား၏သဘောသဘာဝတွင် ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြုမှုကို အဖန်ဖန် လုပ်ဆောင်ထားပါသည်” ဟုဆိုသည်။ Origen က ဧဝံဂေလိတ ရားဟောကြားမှု၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးကို ပေးထားပါသည်။ “မြေကြီးပေါ်၌ ခရစ်တော်၏အသက်တာသိကျွမ်းခြင်းကိုထိုး ဖောက်ပြီး သူ၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။” (Green, ၎င်း၊ စာ-၈၀၊ ၈၁)
ကနဦးခရစ်ယာန်များက မိမိကိုယ်ကိုအကူအညီပေးသည့်တရားဒေသနာများကို မ ကြားခဲ့ကြပါ။ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို တစ်ပိုဒ်ချင်းရှင်းပြသည့် တရားဟောချက်လည်း မ ကြားခဲ့ကြပါ။ သူတို့ အမြဲမပြတ်ကြားရသည်မှာ ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော “ကူရီရောဆ်”၊ သခင်ယေရှုခရစ်၏ သေခြင်း၊ သင်္ဂြိုလ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းသာ ကြားကြပါ သည်။ “အလုံးစုံတို့ကို အစိုးရသောအရှင်ဖြစ်သည်။” (တမန် ၁၀း ၃၆)
အခြားအသင်းတော်မှလူတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာကို ခရစ်တော်၏သေခြင်း၊ နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သောကြောင့် ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် စပါဂျွန်၏ ပြောစကားကို ပြေးမြင်ယောင်မိသည်။ သူက “ကျွန်ုပ်သည် ကျမ်းချက်ကိုယူပြီး ရှင်းပြလိုက် သည်။ ထို့နောက် ကားတိုင်ဆီသို့ ဖြောင့်ဖြောင့်ခေါ်သွားသည်” ဟုဆိုသည်။ ကနဦးခရစ်ယာန် များကဲ့သို့သော စပါဂျွန်သည် ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုဟောပြောသောသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် တစ်ပါးတည်းအပေါ်၌သာ ဗဟိုပြုသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသာ ဗဟိုပြုသည်။ ကနဦးအ သင်းတော်များက သံစုံသီချင်းကို ကောင်းမွန်စွာ သီဆိုနိုင်ကြပါသည်။
ကိုယ်တော်သည် သခင်ဖြစ်သည်၊ သခင်ဖြစ်တော်မူသည်၊
(“သခင်ဖြစ်သည်” Marvin V. Frey, ၁၉၁၈-၁၉၉၂)
ပထမစကားလုံး “ကူးရိရော့ဆ်” က ၎င်းတို့ဟောပြောသောတရားဒေသနာတွင် ခရစ်တော် သည် အဓိကသော့ချက်တွင်ပါဝင်သကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏ဗဟိုတွင်ရှိနေခြင်းကို သွန်သင်ထားပါ သည်။ ကျွန်ု္ပ်တို့၏အသက်တာ၌ သခင်ဘုရား၏ကြီးစိုးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တမန်တော်ပေါလု က ဤသို့ဆိုထားသည်ကို အံ့ဩစရာမရှိပါ။
“လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ယေရှုခရစ်အကြောင်း ကို ဟောတော်မူ၏။” (၁ ကော ၁း ၂၃)
“ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူ သော သခင်မှတပါး အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့တွင် ငါမသိမမှတ် ဟု စိတ်ပြဌါန်းခြင်းရှိ၏။” (၁ ကော ၂း ၂)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို စဉ် ဆက်မပြတ် ဟောပြောရပေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ု္ပ်တို့၏ ယခုနှင့်နောင်အစဉ်မပြတ် အဓိ က တရားဒေသနာဖြစ်ရပါမည်။ အသင်းတော်အများစုက ထိုအကြောင်းကို မလုပ်ဆောင်ကြ သည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် သေလုမျှောပါးဖြစ်နေရသည့်အကြောင်းမှာ ထိုအ ကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မွတ်စလင်အစွန်းရောက်များက လူတို့ကို သူတို့နှင့်အတူလာပြီးအသေခံရန် ခေါ်ဖိတ် ကြပါသည်။ အနောက်တိုင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူငယ် တို့သည် ထိုအရာကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ အိုင်အက်စ်အိုင်အက်စ် တို့သည် လာ၍ မိမိကိုယ်ကို အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲကြသည်။ လူတို့ကို သွားပြီး သတ်ဖြတ်ကြ သည်။ ထိုအရာသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်လုပ်ဆောင်သောအရာမဟုတ်ပါ။ သူက သူ့ထံ သွားပြီး ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးကို ရယူရန်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်က “ငါ သည် သင်တို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်” (ယောဟန် ၁၀း ၂၈) ဟု မိန့်ဆိုထားသည်။ သခင်ယေရှုက သင့်အား တပည့်တော်ဖြစ်ရန် ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်က “ငါ့နောက်သို့လိုက်လိုသောသူသည် မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ (မဿဲ ၁၆း ၂၄)) ခရစ်တော်က အသင်းတော်သို့ရောက်လာပြီး ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရှာဖွေမည့်သူအဖြစ် ခေါ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများကိုခေါ်ဆောင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသည့်အမှုတွင်လည်း သူတပါးကို အကူအညီပေးရန် ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကနဦးခရစ်ယာန်များကဲ့သို့ဖြစ်ရန် လူငယ်များကို ကျွန်ုပ်ဖော်ဖိတ်ထားသည်။ ဟုတ်ပါ သည်။ သင်တို့အား ကနဦးခရစ်ယာန်များကဲ့သို့ဖြစ်စေလိုပါသည်။ ခရစ်တော်၏တပည့်တော် ဖြစ်ပါ။ ယေရှုခရစ်၏တပည့်တော်တစ်ဦးဖြစ်လာပါ။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အတွက် ရပ် တည်ပေးပါ။ တနင်္ဂနွေနံနက် ဝတ်ပြုခြင်းသို့လာပါ။ တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဝတ်ပြုအစီအစဉ်သို့လာပါ။ တနင်္ဂနွေညသို့ လာပါ။ ခရစ်တော်၏စစ်မှန်သော တပည့်တော် တစ်ပါးဖြစ်လာပါ။ လုပ်ဆောင်ပါ။ လုပ်ဆောင်ပါ။ တစ်ချို့သောနှစ်ခြင်းတရားဟောဆရာများ က လူငယ်များအတွက် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မကျသေးဟု ဆိုကြပါသလား။ သင့်ကား တိုင်ကိုထမ်းပြီး ခရစ်တော်၏နောက်တော်သို့လိုက်ပါ။ တပည့်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါ။ ခရစ်တော် ၏စစ်သားအဖြစ်ရပ်တည်ပါ။ ၎င်းသည် သီချင်းစာရွက်တွင် နံပါတ်---------တွင်ရှိပါသည်။ အား လုံးသီဆိုကြပါစို့။
(“ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီ,” Sabine Baring-Gould, ၁၈၃၄-၁၉၂၄)
၎င်းက ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ရှိသော ဒုတိယဂရိစကားလုံးဆီသို့ ဦးဆောင်သွားပါတော့သည်။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ “အဂ္ဂပေ” ဟူသော ဂရိစကားလုံးရှိသည်။
W. E. Vine က အဂ္ဂပေဟူသည်မှာ “ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား၏ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုင်ရာစကားလုံး” ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မိမိကိုယ်ကိုပေးဆပ်ချစ်ခြင်းဟူဆိုလိုသည်။ ယေရှု က တပည့်တော်တို့အား ပထမဆုံးစကားခြွေချိန်တွင် ဤစကားလုံးကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုသည်။
“သင်တို့သည် အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ကြ လော့။ ငါသည် သင်တို့ကိုချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ကြ လော့ဟု ပညတ်သစ်ကို ငါပေး၏။ သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ် ကြလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့သည် ထိုမေတ္တာကိုထောက်ရှု၍၊ သင်တို့ သည် ငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကို သိရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယောဟန် ၁၃း ၃၄၊ ၃၅ )
ဒေါက်တာ တိမောသေလင်းက တရုတ်အသင်းတော်တွင်ရှိနေစဉ် ကျွန်ုပ်၏သင်းအုပ် ဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အစေခံခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ လင်းက ဤသို့ဆိုပါသည်။
တမန်တော်များက သခင်ဘုရားထံက မေတ္တာပညတ်ချက်ကို တိုက်ရိုက်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့က ဆက်လက် ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအကျိုးမှာ “ခရစ်ယာန်တို့ ကတစ်ဦးကိုတစ်ဦး အဘယ်သို့ချစ်ကြသည်ကို ကြည့်ရှုလော့” ဟု (ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူများ) ကြားတွင် လေးစားဂုဏ်ယူဖွယ် အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ယနေ့တွင် “အချင်းချင်းချစ် ခြင်း” သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ၏စက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တွင် အထပ်ထပ်ပြောဆိုသည့် တစ်ခုတည်းသော ကြွေးကြော် သံဖြစ်သည်။ (ထို့ကြောင့်) (သူတို့နှင့်အတူ)) ရှိနေခြင်းသည် ဘုရားသခင်အတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန် တော်တို့အပေါ် သနားညှာတာပါစေသော်။ (Timothy Lin, S.T.M.,Ph.D., အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းလှို့ဝှက်ချက်။ FCBC, ၁၉၉၂၊ စာ-၃၃)
ဒေါက်တာ Michael Green, က ပထမနှင့်ဒုတိယရာစိုတွင်ရှိသော ခရစ်ယာန်များအကြောင်း သူရေးသားသည့်စာအုပ်တွင် ဤအရာကို တင်ပြထားသည်။ ဒေါက်တာ Green က ခရစ်ယာန် ဘာသာသည် ဤခရစ်ယာန်များက တစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်ရမည့်မေတ္တာတန်ခိုးကြောင့် ရောမရုပ် တုကိုးကွယ်မှုကို ကူညီပေးသည်ဟု ဆိုထားသည်။ (Michael Green, Evangelism in the Early Church, Eerdmans, ၂၀၀၃၊ စာ-၁၅၈)
၃။ တတိယအချက်၊ “ကွယ်နိုနီးယား” ဟူသော ဂရိစကားလုံးရှိသည်။
မိဿဟာရ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းမှု၊ မိတ်ဖွဲ့ခြင်းတို့ကို ဆို လိုသည်။ မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းမှာ အဂ္ဂပေမေတ္တာကို အသင်းတော်ရှိ အချင်းချင်းအပေါ် တိုးချဲ့ ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
တရားဟောဆရာအချို့က ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူများကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မိဿဟာ ရဖွဲ့ခွင့်မပြုသင့်ဘူးဟုဆိုတတ်ကြသည်။ တစ်မျိုးတော့ သူတို့ပြောသည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “အကျိုးမဲ့သောမှောင်မိုက်အမှုတို့နှင့်မဆက်ဆံသည်သာမက၊ ထိုအမှုတို့၏ အပြစ်ကိုဖော်ပြလော့” (ဧဖက် ၅း ၁၁) ဟု) မိန့်တော်မူသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်က အခြားအသင်း တော် တော်တော်များများရှိ လူများစွာကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူတို့သည် လူသစ်များနှင့် “အ သင်းတော်ရှိကလေးများ” မပေါင်းဖော်အောင်ထိန်းသိမ်းသင့်သည်ဟု အနက်ဖွင့်ကြပါသည်။ ဒေါက်တာ Vernon McGee က ဤသို့မှတ်ချက်ပြုထားပါသည်။ ဒေါက်တာ Thomas Hale က “ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့သည် (မှောင်မိုက်အလုပ်) နှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင် သောအ ရာဘာမှ မရှိပါ။ နောက်ဆုံးတွင် သူက (ပျောက်ဆုံးသောသူများ) နှင့်အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက် နေမှုမပြုရဟု မဆိုလိုပါ။ ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် အပြစ်သားများနှင့်စားသောက်နေသည်” ဟု ပြောဆိုသောအရာနှင့် အခြေခံသဘောအရကြည့်လျှင် တူညီမှုရှိပါသည်။ (Thomas Hale, M.D., လက်တွေ့အသုံးချဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်း၊ Kingsway Publications, ၁၉၉၇၊ စာ-၇၈၀၊ ဧဖက် ၅း ၁၁ မှတ်စု)
ပထမရာစုက ကနဦးအသင်းတော်များအကြောင်း ဒေါက်တာ Green ပြောဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်သဘောကျနှစ်သက်သည်။ သူက “သူတို့စုံစမ်းလေ့လာသောဩဝါဒကို ထိန်ဝှက်ထား ခြင်းမရှိ။ မိဿဟာရချုပ်တည်းထားခြင်းလည်းမရှိ” ဟုဆိုသည်။ (၎င်း၊ စာ-၂၁၈) “မပြောင်းလဲ သေးသောသူများကို မိဿဟာရရှိစေရန် အသင်းတော်သို့ပြန်လည်ဆောင်ယူလာသည်။ သို့သော်လဲ သုံးနှင့်ကြာကြာ သူတို့သည် ဗတ္တဇံမခံဘဲ နေကြသည်။” (၎င်း)
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော အခြားနည်းလမ်း ဖြင့် ထိုအရာကို လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့က လူသစ်များကို ချက်ချင်းဗတ္တိဇံပေးသည်။ သို့ သော် သူတို့၏ကလေးများကို သူတို့နှင့်မိဿဟာရမဖွဲ့စေလိုကြပါ။ ကနဦးအသင်းတော်များ က ၎င်းကို မှန်ကန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
Jack Hyles တွင်လည်း အဆောက်အဦးနှစ်ခုတောင်ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦးတစ် ခုမှာ ဘက်စ်ကားတွင်ရှိသော ကလေးသူငယ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် မတူညီသော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုကြသည်။ သို့သော် “စစ်မှန်သော”အသင်းတော်သည် မူလအ ဆောက်အဦးတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ “အသင်းတော်ကလေးများ” ကို ကလေးအသစ်များနှင့် မပေါင်းဖော်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားကြပါသည်။ ကလေးသစ်များက ၎င်းတို့၏“တန်ဖိုးရှိလှ သော” အသင်းတော်ကလေးများကို ပျက်စီးစေကြမည်ကို ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဆယ်ကျော်သက်အနေဖြင့် အသင်းတော်သို့ရောက်စဉ်ခါ အသင်းတော် ကလေးများသည် ကျွန်ုပ္ကိုဖြစ်ဆီးဖို့ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းကို အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ကြသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိ ပျောက်ဆုံးသည့်ကလေးများလုပ်ဆောင်ပြုမူသောအရာ များထက် ဆိုးသွင်းသောအရာများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ကြမည်အကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆို ကြသည်ကို ကြားရသည်။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်တွင်မရှိသောကလေးများကို သီးခြား ထိန်း သိမ်းသည့်နည်းလမ်းသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့ရသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။သန်းပေါင်း များစွာသောလူတို့ကို ခရစ်တော်အတွက် ဝေငှသက်သေခံသောအချိန်၌ ကနဦးအသင်းတော် များ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသောအရာလည်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့၏ “တနင်္ဂနွေကျောင်း” အယူအဆအချို့ကို ခိုင်ခိုင်ထားဖို့လိုအပ်သည် ဟုပြောလိုသည်။ မပြောင်းလဲသေးသောသူများကို ယခုခေါ်လာခဲ့ပါ။ သူတို့ကို ကောင်းမွန် သော အစားအစာကျွေးမွေးပါ။ မွေးနေ့ပွဲကိုလည်း ကျင်းပပေးပါ။ ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလကို ပြသပေးပါ။ “နောက်ဆုံးတွင် ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် အပြစ်သားများနှင့်အတူ စားသောက်ပါ သည်။” (Thomas Hale, ၎င်း) “သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်ပါ” သံပြိုင်သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။
အပြစ်ကွင်းပြင်ထဲမှ သူတို့ကို ခေါ်ဆောင်လာပါ။
ကန္တာရသွားနေသူကို ယေရှုထံသို့ ခေါ်ဆောင်ပါ။
(“သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာပါ” Alexcenah Thomas, ၁၉ ရာစု)
ဘာသာရေးစွဲလန်းသူများက ယေရှုအပေါ် အပြစ်မြင်ကြသည်။ မဿဲသည် အခွန်ခံ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယေရှုက သူ့ကိုခေါ်သည်။ မဿဲက နောက်တော်သို့လိုက်ပါသည်။ မဿဲ သည် မိသားစုတွင် အကြီးမားဆုံးသောအရာကိုပေးသည်။ ယေရှုက တပည့်တော်ဆယ့်နှစ်ပါး တို့သည် ထိုအရပ်တွင်ရှိကြပါသည်။ အခွန်ခံနှင့်အပြစ်သားများစွာတို့သည် လာ၍ ယေရှုနှင့်အ တူစားသောက်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ယေရှုအားဖြင့် မှားယွင်းမှုကိုပြု ကြပါသည်။ သူတို့က “သူသည် အပြစ်သားများနှင့်အဘယ့်ကြောင့် စားသောက်ရသနည်း” ဟုဆိုကြသည်။ ယေရှုက “ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အဖို့ ငါလာသည်မဟုတ်၊ အပြစ်ရှိသောသူတို့ ကို နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှါ ငါလာသတည်း” ဟု ပြန်ဖြေခဲ့ပါသည်။ ((မဿဲ ၉း ၁၃)
အပြစ်သားများစွာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလုပ်ဆောင်နေသော တရားဟောဆရာ များသည် ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်က “အပြစ်သားများကို ခေါ် ဆောင်လာပါ၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သမျှ အတတ်န်ိုင်ဆုံး ခေါ်ဆောင်လာပါ။ သာ၍များစွာ ခေါ် ဆောင်လာပါ။” ဟုဆိုပါသည်။ ယေရှုလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ ယခုချက်ချင်း မိဿဟာရအဖွဲ့ဆီ သို့ ခေါ်ဆောင်လာပါ။ ကနဦးအသင်းတော်များလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ “သူတို့ကို ခေါ်ဆောင်လာပါ။” သီးချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုကြပါစို့။
“ထိုသူများသည် တမန်တော်တို့၏ဆုံးမဩဝါဒကိုခံခြင်း၊ အပေါင်းအ သင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ ပဌနာပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍ နေကြ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ်မ ပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူသည်။ (တမန် ၂း ၄၂၊ ၄၇)
Jack Hyles, နှင့် ၎င်း၏သူတပါးသားမယားကိုပြစ်မှား၍ရသောသားနှင့်မေထုန်မှီဝဲ၍ရ သော သမက်တို့သည် “အခြား” အဆောက်အဦးတွင် ရှိနေသင့်သောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့ကုိ စောင့်ရှောက်ထားပါ။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမရသေးသောလူငယ်သစ်လေးများ ကို ထိခိုက်နာကျင်စေကြလိမ့်မည်။ ပျောက်ဆုံးသောလူငယ်တို့အပေါ် အန္တရယ်မကျရောက် အောင် “ခွေး”တို့ကို စောင့်ထိန်းထားပါ။ အဓိကအသင်းတော်ထဲသို့ ပျောက်ဆုံးသောလူငယ် များကို ခေါ်ဆောင်လာပါ။ မှန်ကန်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးသောသူများကို ခေါ် ဆောင်လာပါ။ မေထုန်မှီဝဲနေသော နှစ်ခြင်းဖာရိရှဲတို့ကို ပိတ်ပင်ထားပါ။ တနင်္ဂနွေကျောင်းတွင် ၎င်းတို့၏ခါးစည်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါ။ ပျောက်ဆုံးသောကလေးများကို ပြန်ခေါ်လာပါ။ ကျွန် တော်တို့သည် ညစာ အတူသုံးဆောင်ကြပါလိမ့်မည်။ မွေးနေ့အတူကျင်းပကြပါမည်။ ဟောင်း နွမ်းသောပေါ့ပီယာကာတွန်းကို ကြည့်ရှုကြမည်။ အာမင်။ ကနဦးတရားဟောဆရာများကို နား ထောင်ပါ။ သီချင်းအနည်းငယ်ကို သီဆိုပါ။ “အာမင်” ဟု အော်ဟစ်ပါ။ အချိန်ကောင်းရှိပါစေ။
ထိုဂရိစကားလုံးသုံးလုံးက အသက်ရှင်ပြီး တန်ခိုးရှိသောအသင်းတော်ကို ပြသပါ သည်။ ၎င်းတို့မှာ “ကူရိရော့စ်”၊ သခင်၊ ခရစ်တော်သည် ကူရိရော့စ်ဖြစ်သည်။ သူသည် သခင် ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လာပြီး ခရစ်တော်အကြောင်းကို သင်ယူလေ့လာပါ။ ခရစ်တော်၏နောက် တော်သို့လိုက်ပါ။ သင့်စိတ်နှလုံးသားဖြင့် ခရစ်တော်ကိုချစ်ပါ။ “အဂ္ဂပေ”၊ ခရစ်ယာန်ချစ်မေတ္တာ ဖြစ်သည်။ ပြန်လာပါ။ သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ပါသည်။ သင့်ကိုချစ်ဖို့ အလွန်စိတ်အားထက်သန် လျက်ရှိပါသည်။ ရှေးဟောင်းပုံပြင်စကားက “မေတ္တာအကြောင်း“ ပြောဆိုပါသည်။ သူတို့က “မေတ္တာတွင်” ထင်းချောင်းဟုခေါ်ကြသည်။ စစ်မှန်သော “မေတ္တာ” သည် အသင်းတော်တွင် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာထဲသို့ ပြန်လာပါ။ တနင်္ဂနွေကျောင်းလေးတစ်ခုအလား ထင်းမီး ချောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်စေမည်။ “ကွိုင်နိုနီးယား” ဟူသော စကားလုံးရှိသေးသည်။ မိဿဟာရ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကောင်းစွာပူးပေါင်းခြင်း တို့ကို ဆိုလိုသည်။ ကွိုင်နို နီးယားသည် မိဿဟာရကို ဆိုလိုသည်။ မိဿဟာရမှာ အသင်းတော်၌ရှိသော “အဂ္ဂပေ” မေ တ္တာကို တိုးချဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို စောင့်နေကြပါ သည်။ နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်သို့ လာကြပါ။ တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းသို့လာကြပါ။ စနေညနေတွင် လာကြပါ။ အခြားသူများကိုခေါ်ဆောင်လာရာတွင် အကူအညီပေးပါ။ လူငယ် များလာပြီး မိတ်ဆွေကောင်းကိုဖွဲ့နိုင်သည့် ဤအသင်းတော်ကို လာပြီး အကူအညီပေးကြပါ။ လူတွေရယ်မောပျော်ရွှင်နေမည့်နေရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်များလာပြီး ခရစ်တော်၏တပည့် ဖြစ်မည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ ကားတိုင်တော်၏စစ်သားများဖြစ်မည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ အာမင်။ သီချင်းနံပါတ်ရှစ်၊ “ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီ”သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။ သီဆိုကြပါစို့။
ဒေါက်တာ Chan, ကျေးဇူးပြုပြီး ဆုတောင်းဦးဆောင်ပေးပါ။
“အသင်းတော်၏အုတ်မြစ်တစ်ခု"၊ (Samuel J. Stone ၁ဂ၃၉-၁၉၀၀ ရေးစပ်သည်။)
THREE WORDS GIVE THE SECRET OF
၁။	ပထမအချက်၊ ဂရိစကားလုံး “ကူရိရော့စ်”ရှိသည်။ တမန် ၁၀း ၃၆၊ ၁ကော ၁း ၂၃၊ ၂း ၂၊ ယောဟန် ၁၀း ၂၈၊ မဿဲ ၁၆း ၂၄။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ “အဂ္ဂပေ” ဟူသော ဂရိစကားလုံးရှိသည်။ ယောဟန် ၁၃း ၃၄၊ ၃၅။
၃။ တတိယအချက်၊ “ကွယ်နိုနီးယား” ဟူသော ဂရိစကားလုံးရှိသည်။ မဿဲ ၉း ၁၃၊ တမန် ၂း ၄၂၊ ၄၇။